စမတ်ကျတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ? | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
စမတ်ကျတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ?
သင့်ဘဝမှာ ဝတ်ပုံစားပုံ စမတ်ကျဖို့ နည်းလမ်းတွေအများကြီး တွေ့ဖူးမှာပါ။ တချို့နည်းလမ်း တွေက အသုံးဝင်နိုင်ပေမဲ့ တချို့တွေက ကိုယ့်အတွက် အသုံးမဝင်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကတော့ ယောင်္ကျားလေးတော်တော်များများ အတွက် အသုံးဝင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
1. Ready Made Suit တွေ မဝတ်ပါနဲ့
Suit ကောင်းကောင်းတစ်စုံဆိုတာ အမျိုးသားတွေအတွက် လိုကိုလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Suit ဝယ်မယ်ဆို သင်နဲ့ လုံးဝကွက်တိကျတဲ့ Suit ကိုသာ ချုပ်ပြီးဝတ်သင့်ပါတယ်။ အကုန်အကျများနိုင်ပေမယ့် Ready Made Suit တွေဝယ်မိရင် ပုခုံးက ကြပ်နေတာတွေ၊ ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေတာတွေ ဖြစ်တတ်တာမို့ ငွေကုန်အကျိုးမရှိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်အတိုင်းနဲ့ ကွက်တိကျတဲ့ Suit ကို ချုပ်ပြီးဝတ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
2. နာရီကောင်းကောင်း တစ်လုံးအပေါ်မှာ ရင်းနှီးပါ
အမျိုးသားတွေက ဝတ်စရာ Accessories များများစားစား မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်အသက်အရွယ်၊ လက်အရွယ်အစား၊ Style တွေနဲ့ကိုက်တဲ့ နာရီကောင်းကောင်းတစ်လုံးက ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နာရီဆိုတာ နေ့တိုင်းဝတ်ဆင်ရတဲ့ အရာဖြစ်တာမို့ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ နာရီကိုပဲ သေချာရွေးချယ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
3. သာမန်ရိုးကျ အရောင်တွေပဲ မဝတ်ပါနဲ့
အမျိုးသား အများစုက အမည်း၊ ခဲရောင်၊ နက်ပြာ စတာတွေအပြင် တခြားအရောင်တောက်တောက်တွေ ဝတ်ဖို့ စိတ်ကူးလေ့မရှိကြပါဘူး။ ဒီလိုဝတ်နေကြ အရောင်တွေကနေ ခွဲပြီးဝတ်ဆင်တာကလည်း သင့်ကိုပိုပြီး ပေါ်လွင်စေမှာပါ။
4. နေရာစုံမှာ အသုံးတည့်တဲ့ Jeans တွေ
Jeans ဆိုတာ Dinner ဖြစ်ဖြစ်၊ Dating ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Shoes ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Sneakers ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာမဆို၊ ဘာနဲ့မဆို၊ ဝတ်လို့ရပါတယ်။ Jeans တွေဟာ ဝတ်တာကြာလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်နဲ့တစ်သားတည်း ဖြစ်လာသလို ခံစားရမှာပါ။ အရေးကြီးတဲ့ အချက်က Jeans တွေကို ခဏခဏ မလျော်ဖို့ပါပဲ။
5. Quality ကောင်းတဲ့ Shoesတွေ Sneakersတွေပဲ ဝယ်ပါ
သင်က Authentic မဝတ်ပဲ Copy တွေပဲ ဝတ်နေမယ်ဆိုရင် Shoes စီးရတဲ့ တကယ့် အရသာအစစ်ကို သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနှစ်ခုကြားမှာ စီးတဲ့အခါ ခံစားရတာက အကွာကြီးပါ။ ဒါကြောင့်မို့ Quality ကောင်းတဲ့ Shoes ကိုသာ ဝယ်စေချင်ပါတယ်။
6. Accessories တွေကို အများကြီးမဝတ်ပါနဲ့
Accessories တွေက Style ကိုပိုကျစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများကြီးဝတ်ရင် ကိုယ်နဲ့မလိုက်ဖက်တာမျိုး ၊ ကိုယ်ရဲ့အဝတ်အစားတွေက မပေါ်လွင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
7. ကိုယ်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး ဆံပင်စတိုင်ကိုပဲ ထားပါ
ဆံပင်ဆိုတာ လူတွေရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆံပင်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ ရုပ်ပါပြောင်းလိုက်သလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ခေတ်စားနေတဲ့ ဆံပင်ပုံစံတွေထက် မိမိနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင် ပုံစံကိုပဲ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာ တိုင်ပင်ပြီး ညှပ်တာက ပိုပြီးသင့်လျော်ပါတယ်။
Live-Style Yangon Trend Read 185 times